Southwest Airlines haisi kuzodzinga vashandi vayo vakamirira kuregererwa kwekudzivirira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Southwest Airlines haisi kuzodzinga vashandi vayo vakamirira kuregererwa kwekudzivirira
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Southwest Airlines haisi kuzodzinga vashandi vayo vakamirira kuregererwa kwekudzivirira.
Seye kontrakta wezvematongerwo enyika, Southwest Airlines yakange yaronga kuisa vese vashandi vasina kubayiwa nhomba vaive vasati vagamuchira kuregererwa kwekurapa kana kwechitendero musi waZvita 8 pazororo risingabhadharwe.
Iyo memo inovimbisa vashandi kuti vanogona kuenderera mberi vachishanda kana kwavo kusunungurwa kusati kwabvumidzwa.
Panzvimbo pebasa risingabhadharwe, vashandi vekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero vakamirira mutongo vacharamba vachiwana mubhadharo.
Kana kusunungurwa kwavo kuchirambwa, vashandi vanogona kunyorera zvakare kana vaine ruzivo rutsva kana mamiriro.
Vashandi vekuSouthwest Airlines havachamanikidzwa kutora zororo risina kubhadharwa vachinyorera kuregererwa kuchirongwa chekudzivirira cheCOVID-19.
Kutevera svondo rekuratidzira, kuramba uye kudzima ndege, ndege yendege yakashandura nzira pabasa rekudzivirira mushonga.
Southwest Airlines haichazomanikidzira vashandi vakamirira danho pamusoro pekuregererwa kwechitendero kana chekurapa kumutemo wekumanikidza wekudzivirira kuti vatore zororo risingabhadharwe kudzamara nyaya dzavo dzagadziriswa, sekureva kwememo yakawanikwa nevemabasa enhau nhasi.
Maodzanyemba akadziva kumadokero akasimbisa huchokwadi hweiyo memo, iyo inopa vashandi kusvika Mbudzi 24 kuti vange vabaiwa jekiseni kana kunyorera kuregererwa.
Panzvimbo pebasa risingabhadharwe, vashandi vakamirira kutongwa pamusoro pevanoregererwa vacharamba vachiwana mari yekutambira uye vanogona kutoramba vachishanda "se [maodzanyemba akadziva kumadokero] vachirangana navo mukuzadzisa zvinodiwa (jekiseni kana pekugara chaipo)," katsamba kanotsanangura.
Yakanyorwa nemutevedzeri wemutungamiriri wemabasa nekugamuchira vaeni Steve Goldberg uye mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye mukuru wevakuru Julie Weber, inovimbisa vashandi kuti vanogona kuenderera mberi vachishanda kana kusunungurwa kwavo kusati kwatenderwa chero bedzi vachitevera mitemo yekuzeya neyekushamwaridzana nevanhu, uye anovimbisa kuti vashandi vanogona kunyorera zvakare kana kusunungurwa kwavo kuchirambwa kana vaine "ruzivo rutsva kana mamiriro [ivo] vangangoda kuti Kambani ifunge."
Kuburitswa kwememo kunouya mushure memazuva ekuratidzira kunze kwekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweDallas dzimbahwe uye runyerekupe rwekurwara-kunze kwevatariri vemumigwagwa pamwe nevamwe vashandi. Maodzanyemba akadziva kumadokero akamanikidzwa kudzima zviuru zveendege svondo rapfuura - vanopfuura chiuru nemusi weSvondo chete - kunyangwe zvairamba kubvuma kuti chii chiri kukonzera kukanzurwa, muzviitiko zvakawanda vachipa mhosva mamiriro ekunze kunyangwe kujeka uye kune zuva. Nhandare dzakakwenenzverwa nevatakuri vakatsamwa sezvo vangangove vafambi vakasvika kuzowana nendege dzisinganzwisisike dzamiswa.
Seye kontrakta wezvematongerwo enyika, Southwest Airlines akange aronga kuisa vashandi vese vasina kubayiwa nhomba vaive vasati vagamuchira kuregererwa kwekurapa kana kwechitendero musi waZvita 8 pazororo risati rabhadharwa.
Kusiyana nevatakuri vadiki, pasi pemvumo yemutungamiriri inoshaya mukana wekubvumidza vashandi kuti vape kuongororwa kwevhiki nevhiki. Kubva svondo rapfuura, vashandi zviuru makumi mashanu nezviviri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero vanga vasati vatora pfuti.
Anokwikwidza kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero United Airlines yakatora gwaro rayo rekuzvidzivirira muna Nyamavhuvhu, Biden asati atombotaura nezvehutongi, uye akatyisidzira vasingateereri zororo risingabhadharwe. Nekudaro, mutongi wemubatanidzwa muFort Worth akambomisa nendege kuenda kumberi nechirango. Vamwe 90% yevashandi vekambani vanonzi vakabayiwa nhomba.
Pakutanga mwedzi uno, vamwe vatakuri veUS American Airlines, Alaska Airlines, uye JetBlue vakagamuchira zvakare mvumo yekudzivirira hutongi, sezvo vachionekwa semakontrakta emubatanidzwa uye nekudaro havafanirwe kubuda mujabha.